အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၁) - Myanmar Network
အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၁)
Posted by Betty on July 21, 2015 at 11:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီတစ်ပါတ်မှာ အ၀တ်အစား၊ အ၀တ်အထည်တို့ကို အခြေခံထားတဲ့ အီဒီယမ်တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်း တစ်ခုချင်း၏ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ဥပမာများနဲ့တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ at the drop ofahat = ကြိုတင်အကြောင်းကြားရန်မလိုဘဲနှင့်။ ချက်ချင်း။
e.g. My Grandma will babysit for anyone at the drop ofahat. (ကျွန်မအဖွားက ကြိုတင်အကြောင်းကြားရန်မလိုဘဲနှင့် ဘယ်သူအတွက်မဆို ကလေးထိန်းပေးပါတယ်။)
၂။ (have a) bee in one's bonnet = လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား တနုံ့နုံ့ စိတ်ပူပန်စေသည့်၊ စိတ်တိုနေစေသည့်အရာတစ်ခုခု။
e.g. Milan has hadabee in his bonnet all day, but he won't tell me what's wrong. (Milan ဟာ တစ်ခုခုကြောင့် တစ်နေ့လုံး စိတ်တိုနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော့်ကို မပြောဘူး။)
၃။ below the belt = မတရားသဖြင့် (သို့) လူမှုရေးအရ လက်မခံနိုင်သော (သို့) ယုတ်ညံ့သော
e.g. His comment about Manfred's handicap was below the belt. (Manfred ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သူ့မှတ်ချက်က တော်တော်ယုတ်ညံ့တာပဲ။)
၄။ bursting at the seams = မတော်/မဆန့်တော့ခြင်း
e.g. I ate too much. I'm bursting at the seams in these jeans. (ကျွန်တော် စားတာများသွားပြီ။ ဒီဂျင်းဘောင်းဘီတောင် မဆန့်တော့ဘူး)
၅။ caught with one's pants down = ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ရှက်ဖွယ်အနေအထားဖြစ်ခြင်း
e.g My students caught me with my pants down on Monday. I forgot about the field trip. (တနင်္လာနေ့က ကျွန်တော့်တပည့်တွေနဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ကွင်းဆင်းရမှာကို ကျွန်တော် မေ့သွားတယ်လေ။)
၆။ (have a) card up one's sleeve = လျှို့ဝှက်ချက် (သို့) အရန်အစီအစဉ်ရှိခြင်း (သို့) အကြံအစည်တစ်ခုရှိခြင်း
e.g. I think Josh hasacard up his sleeve cause he wants me to wearadress to the fast-food restaurant. (Josh မှာ အကြံတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမြန်ပြင် အစားအစာဆိုင်ကို ကျွန်မကို ဂါဝန်ဝတ်သွားစေချင်တယ်တဲ့။)
၇။ buckle down = ပိုပြီးကြိုးကြိုးစားစား အလုပ်လုပ်သည်။
e.g. It's almost exam time, so I need to buckle down this weekend. (အခုက စာမေးပွဲရာသီရောက်တော့မှာလေ။ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ ကျွန်တော်ပိုပြီး ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ရမယ်။)
၈။ burnahole in one's pocket = သုံးချင်နေသော ပိုက်ဆံ၊ ငွေယား
e.g. Let's go to the mall after school. There'sahundred dollar bill burningahole in my pocket. (ကျောင်းဆင်းရင်ကုန်တိုက်သွားရအောင်။ ငါ့အိတ်ထဲမှာ သုံးပစ်ချင်နေတဲ့ ဒေါ်လာတစ်ရာတန် ရှိနေတယ်။)
၉။ dress to kill, dress to the nines = ကောင်းမွန်သော (သို့) ညှို့ဓာတ်ကောင်းသော အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်း။ သာမာန်ထက်ထူးခြားကောင်းမွန်သော အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်း။
e.g. My cousin was dressed to kill on her birthday. (ကျွန်မရဲ့ ညီမ၀မ်းကွဲက သူ့မွေးနေ့ပွဲမှာ ညှို့ဓာတ်ကောင်းတဲ့ အ၀တ်အစားကို ၀တ်ထားတယ်။)
၁၀။ fit likeaglove = (ခန္ဓာကိုယ်နှင့်) ကွက်တိဖြစ်သည်
e.g. Anita's prom dress fits me likeaglove. (Anita ရဲ့ ကျောင်းဆင်းကပွဲ ဂါဝန်က ကျွန်မနဲ့ကွက်တိပဲ။)
၁၁။ fine-tooth comb = စေ့စပ်စွာ၊ အလွန်သေချာစွာ
e.g. The police looked for fingerprints withafine-tooth comb. (ရဲတွေက လက်ဗွေရာတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ်ရှာဖွေကြတယ်။)
၁၂။ fly by the seat of one's pants = အစီအစဉ်အရ မဟုတ်ဘဲ အဆင်ပြေသလို ပြုလုပ်သည်။
e.g. I had never taught art to kids before. I had to fly by the seat of my pants. (အရင်က ကျွန်တော် ကလေးတွေကို ပန်းချီတစ်ခါမှ မသင်ဘူးပါ။ အစီအစဉ်မရှိဘဲ အဆင်ပြေသလိုပဲ သင်လိုက်ရတယ်။)
၁၃။ handle with kid gloves = နူးနူးညံ့ညံ့ / ဖြေးဖြေးသက်သာကိုင်တွယ်ခြင်း
e.g. Please handle my grandmother's tea set with kid gloves. (ကျွန်မအဖွားရဲ့ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်အစုံကို ဖြေးဖြေးသက်သာ ကိုင်တွယ်ပါ။)
၁၄။ hand-me-down = ၀တ်ပြီး/သုံးပြီးသားအ၀တ်အထည် စသည်ဖြင့်။ တပတ်ရစ်။
e.g. We buy hand-me-down skates because the kids' feet grow so quickly. (ကလေးတွေရဲ့ ခြေထောက်တွေက ခဏလေးနဲ့ ကြီးလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကတော့ တပတ်ရစ် စကိတ်တွေကိုပဲ ၀ယ်တယ်။)
၁၅။ hat trick = လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက ဂိုး (၃) ဂိုးသွင်းခြင်း
e.g. The fans cheered when the hockey player gotahat trick. (ဟော်ကီအားကစားသမားက တစ်ယောက်တည်း ဂိုး (၃)လုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေက သြဘာပေးကြသည်။)
၁၆။ in one's birthday suit = ကိုယ်လုံးတီးဖြင့်
e.g. The swimmers in the lake were in their birthday suits. (ရေကန်ထဲမှာ ရေကူးနေတဲ့သူတွေက ကိုယ်လုံးတီး ကူးနေကြတယ်။)
၁၇။ keep one's shirt on = စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားသည်။
e.g. I know you're inahurry, but please keep your shirt on. (ခင်ဗျားအလျင်လိုနေတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြိုးစားပြီး စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။)
၁၈။ keep something zipped = တစ်စုံတစ်ခုကို လျှို့ဝှက်ထားခြင်း
e.g. We know we're havingaboy, but we're keeping it zipped from the grandparents. (ကျွန်မတို့သားလေးမွေးမယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို အဖိုး၊ အဖွားတွေကို မပြောပဲ လျှို့ဝှက်ထားတယ်။)
၁၉။ off the cuff = အစီအစဉ်မရှိဘဲနှင့် စကားပြောခြင်း၊ လက်တန်းပြောခြင်း
e.g. I didn't haveaspeech prepared. Everything I said was off the cuff. (ကျွန်တော်ပြောရမဲ့ စကားကို မပြင်ဆင်ထားခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ပြောသမျှ အားလုံးက လက်တန်း ပြောချလိုက်တာ။)
၂၀။ pull up one's socks = ပို၍ ကြိုးစားခြင်း
e.g. Marco will have to pull up his socks if he wants to make the football team. (ဘောလုံးအသင်းထဲပါချင်ရင် Marco ပိုပြီး ကြိုးစားဖို့လိုလိမ့်မယ်။)
၂၁။ putasock in it = စကားမပြောနဲ့တော့၊ ပါးစပ်ပိတ်ထား
e.g. Putasock in it! I'm trying to tellastory. (တိတ်တိတ်နေ။ ငါဒီမှာ ပုံပြောဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။)
၂၂။ put one's thinking cap on = ပြဿနာတစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း / ကြိုးကြိုးစားစား စဉ်းစားခြင်း
e.g. I can't remember where the Christmas decorations are. I'll have to put my thinking cap on. (ခရစ္စမတ်အတွက် အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်မှာမှန်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ ကြိုးစားပြီး စဉ်းစားကြည့်ရမှာပဲ။)
၂၃။ put oneself in someone else's shoes = တခြားသူအခြေအနေတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထားကြည့်ခြင်း
e.g. Put yourself in Amber's shoes. She doesn't even haveacar to drive. (မင်းကိုယ်မင်း Amber နေရာမှာ နေကြည့်စမ်း။ သူ့မှာ မောင်းစရာ ကားတောင် မရှိဘူး။)
၂၄။ ride one's coattails = တခြားသူတစ်ယောက်ကို အလုပ်အားလုံးလုပ်စေခြင်း။ ရေသာခိုခြင်း။
e.g. It wasagroup project, but everyone rode Andrew's coattails. (အဖွဲ့လိုက် စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ လူတိုင်းက Andrew ကိုပဲ အလုပ်အားလုံးကို လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။)
၂၅။ roll up one's sleeves = ကြိုးကြိုးစားစား/ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်သည်။
e.g. The celebrities rolled up their sleeves and washed cars for charity. (နာမည်ကြီးတွေက ကုသိုလ်ဖြစ်အနေဖြင့် ကားများကို ကြိုးကြိုးစားစား ဆေးကြတယ်။)
၂၆။ take one's hat off to someone = တစ်စုံတစ်ခုအတွက် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ဂုဏ်ပြုခြင်း။
e.g. I take my hat off to Jim. The doctors said he'd never walk, and he just ranamarathon. (ကျွန်တော် Jim ကို လေးစားတယ်ဗျာ။ ဆရာဝန်တွေက သူ့ကို ဘယ်တော့မှ လမ်းမလျှောက်တော့ဘူး လို့ပြောကြပေမဲ့ သူအခုလေးတင်ပဲ မာရသွန်မှာ ၀င်ပြေးခဲ့တယ်။)
၂၇။ wear one's heart on one's sleeve = စိတ်ခံစားချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြခြင်း
e.g. My dad's not afraid to cry. He always wears his heart on his sleeve. (ကျွန်တော့အဖေက ငိုရမှာမကြောက်ဘူး။ သူက အမြဲတမ်းပဲသူ့ခံစားချက်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြတတ်တယ်။)
၂၈။ Wear the trousers = (အထူးသဖြင့် အိမ်တစ်အိမ်တွင်) ဩဇာရှိသည်၊ ပါဝါရှိသည်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်သည်။
e.g. By the look of things, the kids wear the trousers in this household. (ကြည့်ရတာကတော့ ဒီအိမ်ထောင်စုမှာ ကလေးတွေက ပိုင်ပုံရတယ်။)
Englishclub.com မှ Clothing Idioms ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတဈပါတျမှာ အ၀တျအစား၊ အ၀တျအထညျတို့ကို အခွခေံထားတဲ့ အီဒီယမျတခြို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ အသုံးအနှုနျး တဈခုခငျြး၏ အဓိပ်ပာယျနဲ့ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာ အသုံးပွုရမယျဆိုတာကို ဥပမာမြားနဲ့တကှ ဖျောပွထားပါတယျ။
၁။ at the drop ofahat = ကွိုတငျအကွောငျးကွားရနျမလိုဘဲနှငျ့။ ခကျြခငျြး။
e.g. My Grandma will babysit for anyone at the drop ofahat. (ကြှနျမအဖှားက ကွိုတငျအကွောငျးကွားရနျမလိုဘဲနှငျ့ ဘယျသူအတှကျမဆို ကလေးထိနျးပေးပါတယျ။)
၂။ (have a) bee in one's bonnet = လူတဈဦးတဈယောကျအား တနုံ့နုံ့ စိတျပူပနျစသေညျ့၊ စိတျတိုနစေသေညျ့အရာတဈခုခု။
e.g. Milan has hadabee in his bonnet all day, but he won't tell me what's wrong. (Milan ဟာ တဈခုခုကွောငျ့ တဈနလေုံ့း စိတျတိုနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတေျာ့ကို မပွောဘူး။)
၃။ below the belt = မတရားသဖွငျ့ (သို့) လူမှုရေးအရ လကျမခံနိုငျသော (သို့) ယုတျညံ့သော
e.g. His comment about Manfred's handicap was below the belt. (Manfred ရဲ့အားနညျးခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ သူ့မှတျခကျြက တျောတျောယုတျညံ့တာပဲ။)
၄။ bursting at the seams = မတျော/မဆနျ့တော့ခွငျး
e.g. I ate too much. I'm bursting at the seams in these jeans. (ကြှနျတျော စားတာမြားသှားပွီ။ ဒီဂငျြးဘောငျးဘီတောငျ မဆနျ့တော့ဘူး)
၅။ caught with one's pants down = ကသိကအောကျဖွဈခွငျး၊ ရှကျဖှယျအနအေထားဖွဈခွငျး
e.g My students caught me with my pants down on Monday. I forgot about the field trip. (တနင်ျလာနကေ့ ကြှနျတေျာ့တပညျ့တှနေဲ့ စိတျကသိကအောကျဖွဈစရာ တဈခုဖွဈသှားတယျ။ ကှငျးဆငျးရမှာကို ကြှနျတျော မသှေ့ားတယျလေ။)
၆။ (have a) card up one's sleeve = လြှို့ဝှကျခကျြ (သို့) အရနျအစီအစဉျရှိခွငျး (သို့) အကွံအစညျတဈခုရှိခွငျး
e.g. I think Josh hasacard up his sleeve cause he wants me to wearadress to the fast-food restaurant. (Josh မှာ အကွံတဈခုခုရှိလိမျ့မယျလို့ ကြှနျမ ထငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အမွနျပွငျ အစားအစာဆိုငျကို ကြှနျမကို ဂါဝနျဝတျသှားစခေငျြတယျတဲ့။)
၇။ buckle down = ပိုပွီးကွိုးကွိုးစားစား အလုပျလုပျသညျ။
e.g. It's almost exam time, so I need to buckle down this weekend. (အခုက စာမေးပှဲရာသီရောကျတော့မှာလေ။ ဒီစနေ၊ တနင်ျဂနှမှော ကြှနျတျောပိုပွီး ကွိုးကွိုးစားစား လုပျရမယျ။)
၈။ burnahole in one's pocket = သုံးခငျြနသေော ပိုကျဆံ၊ ငှယေား
e.g. Let's go to the mall after school. There'sahundred dollar bill burningahole in my pocket. (ကြောငျးဆငျးရငျကုနျတိုကျသှားရအောငျ။ ငါ့အိတျထဲမှာ သုံးပဈခငျြနတေဲ့ ဒျေါလာတဈရာတနျ ရှိနတေယျ။)
၉။ dress to kill, dress to the nines = ကောငျးမှနျသော (သို့) ညှို့ဓာတျကောငျးသော အ၀တျအစားမြားဝတျဆငျခွငျး။ သာမာနျထကျထူးခွားကောငျးမှနျသော အဝတျအစားမြား ဝတျဆငျခွငျး။
e.g. My cousin was dressed to kill on her birthday. (ကြှနျမရဲ့ ညီမ၀မျးကှဲက သူ့မှေးနပှေဲ့မှာ ညှို့ဓာတျကောငျးတဲ့ အ၀တျအစားကို ၀တျထားတယျ။)
၁၀။ fit likeaglove = (ခန်ဓာကိုယျနှငျ့) ကှကျတိဖွဈသညျ
e.g. Anita's prom dress fits me likeaglove. (Anita ရဲ့ ကြောငျးဆငျးကပှဲ ဂါဝနျက ကြှနျမနဲ့ကှကျတိပဲ။)
၁၁။ fine-tooth comb = စစေ့ပျစှာ၊ အလှနျသခြောစှာ
e.g. The police looked for fingerprints withafine-tooth comb. (ရဲတှကေ လကျဗှရောတှကေို စစေ့စေ့ပျစပျရှာဖှကွေတယျ။)
၁၂။ fly by the seat of one's pants = အစီအစဉျအရ မဟုတျဘဲ အဆငျပွသေလို ပွုလုပျသညျ။
e.g. I had never taught art to kids before. I had to fly by the seat of my pants. (အရငျက ကြှနျတျော ကလေးတှကေို ပနျးခြီတဈခါမှ မသငျဘူးပါ။ အစီအစဉျမရှိဘဲ အဆငျပွသေလိုပဲ သငျလိုကျရတယျ။)
၁၃။ handle with kid gloves = နူးနူးညံ့ညံ့ / ဖွေးဖွေးသကျသာကိုငျတှယျခွငျး
e.g. Please handle my grandmother's tea set with kid gloves. (ကြှနျမအဖှားရဲ့ လကျဖကျရညျပနျးကနျအစုံကို ဖွေးဖွေးသကျသာ ကိုငျတှယျပါ။)
၁၄။ hand-me-down = ၀တျပွီး/သုံးပွီးသားအ၀တျအထညျ စသညျဖွငျ့။ တပတျရဈ။
e.g. We buy hand-me-down skates because the kids' feet grow so quickly. (ကလေးတှရေဲ့ ခွထေောကျတှကေ ခဏလေးနဲ့ ကွီးလာတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ကတော့ တပတျရဈ စကိတျတှကေိုပဲ ၀ယျတယျ။)
၁၅။ hat trick = လူတဈဦးတဈယောကျတညျးက ဂိုး (၃) ဂိုးသှငျးခွငျး
e.g. The fans cheered when the hockey player gotahat trick. (ဟျောကီအားကစားသမားက တဈယောကျတညျး ဂိုး (၃)လုံးသှငျးလိုကျတဲ့အခါ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှကေ သွဘာပေးကွသညျ။)
၁၆။ in one's birthday suit = ကိုယျလုံးတီးဖွငျ့
e.g. The swimmers in the lake were in their birthday suits. (ရကေနျထဲမှာ ရကေူးနတေဲ့သူတှကေ ကိုယျလုံးတီး ကူးနကွေတယျ။)
၁၇။ keep one's shirt on = စိတျတညျငွိမျအောငျ ကွိုးစားသညျ။
e.g. I know you're inahurry, but please keep your shirt on. (ခငျဗြားအလငျြလိုနတော သိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကွိုးစားပွီး စိတျငွိမျငွိမျထားပါ။)
၁၈။ keep something zipped = တဈစုံတဈခုကို လြှို့ဝှကျထားခွငျး
e.g. We know we're havingaboy, but we're keeping it zipped from the grandparents. (ကြှနျမတို့သားလေးမှေးမယျဆိုတာကို သိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါကို အဖိုး၊ အဖှားတှကေို မပွောပဲ လြှို့ဝှကျထားတယျ။)
၁၉။ off the cuff = အစီအစဉျမရှိဘဲနှငျ့ စကားပွောခွငျး၊ လကျတနျးပွောခွငျး
e.g. I didn't haveaspeech prepared. Everything I said was off the cuff. (ကြှနျတျောပွောရမဲ့ စကားကို မပွငျဆငျထားခဲ့ဘူး။ ကြှနျတျောပွောသမြှ အားလုံးက လကျတနျး ပွောခလြိုကျတာ။)
၂၀။ pull up one's socks = ပို၍ ကွိုးစားခွငျး
e.g. Marco will have to pull up his socks if he wants to make the football team. (ဘောလုံးအသငျးထဲပါခငျြရငျ Marco ပိုပွီး ကွိုးစားဖို့လိုလိမျ့မယျ။)
၂၁။ putasock in it = စကားမပွောနဲ့တော့၊ ပါးစပျပိတျထား
e.g. Putasock in it! I'm trying to tellastory. (တိတျတိတျနေ။ ငါဒီမှာ ပုံပွောဖို့ ကွိုးစားနတေယျ။)
၂၂။ put one's thinking cap on = ပွဿနာတဈခုခုကို ဖွရှေငျးနိုငျရနျ ခဲခဲယဉျးယဉျး / ကွိုးကွိုးစားစား စဉျးစားခွငျး
e.g. I can't remember where the Christmas decorations are. I'll have to put my thinking cap on. (ခရစ်စမတျအတှကျ အလှဆငျပစ်စညျးတှေ ဘယျမှာမှနျးမမှတျမိတော့ဘူး။ ကွိုးစားပွီး စဉျးစားကွညျ့ရမှာပဲ။)
၂၃။ put oneself in someone else's shoes = တခွားသူအခွအေနတှေငျ ကိုယျ့ကိုယျကို ထားကွညျ့ခွငျး
e.g. Put yourself in Amber's shoes. She doesn't even haveacar to drive. (မငျးကိုယျမငျး Amber နရောမှာ နကွေညျ့စမျး။ သူ့မှာ မောငျးစရာ ကားတောငျ မရှိဘူး။)
၂၄။ ride one's coattails = တခွားသူတဈယောကျကို အလုပျအားလုံးလုပျစခွေငျး။ ရသောခိုခွငျး။
e.g. It wasagroup project, but everyone rode Andrew's coattails. (အဖှဲ့လိုကျ စီမံခကျြတဈခုဖွဈခဲ့ပမေဲ့ လူတိုငျးက Andrew ကိုပဲ အလုပျအားလုံးကို လုပျခိုငျးခဲ့တယျ။)
၂၅။ roll up one's sleeves = ကွိုးကွိုးစားစား/ပငျပငျပနျးပနျးအလုပျလုပျသညျ။
e.g. The celebrities rolled up their sleeves and washed cars for charity. (နာမညျကွီးတှကေ ကုသိုလျဖွဈအနဖွေငျ့ ကားမြားကို ကွိုးကွိုးစားစား ဆေးကွတယျ။)
၂၆။ take one's hat off to someone = တဈစုံတဈခုအတှကျ လူတဈဦးတဈယောကျကို လေးစား အသိအမှတျပွုခွငျး၊ ဂုဏျပွုခွငျး။
e.g. I take my hat off to Jim. The doctors said he'd never walk, and he just ranamarathon. (ကြှနျတျော Jim ကို လေးစားတယျဗြာ။ ဆရာဝနျတှကေ သူ့ကို ဘယျတော့မှ လမျးမလြှောကျတော့ဘူး လို့ပွောကွပမေဲ့ သူအခုလေးတငျပဲ မာရသှနျမှာ ၀ငျပွေးခဲ့တယျ။)
၂၇။ wear one's heart on one's sleeve = စိတျခံစားခကျြမြားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖျောပွခွငျး
e.g. My dad's not afraid to cry. He always wears his heart on his sleeve. (ကြှနျတော့အဖကေ ငိုရမှာမကွောကျဘူး။ သူက အမွဲတမျးပဲသူ့ခံစားခကျြတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖျောပွတတျတယျ။)
၂၈။ Wear the trousers = (အထူးသဖွငျ့ အိမျတဈအိမျတှငျ) ဩဇာရှိသညျ၊ ပါဝါရှိသညျ၊ ဆုံးဖွတျခကျြခသြူဖွဈသညျ။
e.g. By the look of things, the kids wear the trousers in this household. (ကွညျ့ရတာကတော့ ဒီအိမျထောငျစုမှာ ကလေးတှကေ ပိုငျပုံရတယျ။)
Permalink Reply by Myat Mon on July 21, 2015 at 13:12
Thanks for your sharing. It's very useful for me.
Permalink Reply by Aung ko ko oo on July 24, 2015 at 0:12
Permalink Reply by Aye Su HLaing on October 14, 2015 at 16:19